Gary Carlos Cervantes – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Commando (1985) Unicode တာဝန်တွေကနေ အနားယူပြီး အေးအေးဆေးဆေးနေနေတဲ့ စစ်သားဟောင်းတစ်ယောက် . အာဏာရရင်ပြီးရော ဘာမဆိုလုပ်မယ့်သူတွေ အတိတ်ကလူတွေက အတိတ်မှာမနေခဲ့ဘဲ အနာဂတ်အထိလိုက်လာတဲ့အခါ… . ဒီနေ့မှာ 1985 လောက်ကထွက်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်က ဇာတ်ကားဆို ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းမှကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူဆိုရင် နောက်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကို အကြမ်းဖျင်းခန့်မှန်းမိနေတာကိုတောင် အခုမှာ ရင်တမမနဲ့ စိတ်လှုပ်တရှားကြည့်နေရတဲ့ဖီလင်ကို ကြိုက်တယ်ဆိုရင် ဪ ဒါနဲ့ နောက်ပြီး တခုကျန်သေးတယ် သင်က မင်းသားကြီး Arnold Schwarzenegger ရဲ့ပရိတ်သတ်ဆိုရင် ဒီဇာတ်ကားကိုကြည့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ တစ်ကားလုံး Fight Scene စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ဘယ်လိုများဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကို စောင့်ကြည့်နေရတာက တကယ်ကိုမိုက်တဲ့ Feeling ပါ။ ဇာတ်လမ်းကို အနည်းငယ်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ မင်းသားကြီး Arnold ဟာ John Matrix အမည်ရှိ အနားယူထားတဲ့စစ်သားတစ်ယောက်ပါ။ အရင်က ဘယ်လိုကိစ္စတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တော့ ဖော်ပြမထားပါဘူး။ ဇာတ်ကားအစ တစ်နေ့မှာ သမီးနဲ့အတူ လူတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာ ဇာတ်မြှုပ်နေတဲ့ John ရဲ့ အိမ်ကို Helicopter တစ်စီးရောက်လာပါတယ်။ အရင်က John ရဲ့ အထက်လူကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ General Kirby က John ဆီကိုလာရောက်ကာ ...
IMDB: 6.7/10 145908 votes
The Ring (2002) Unicode The Ring အဝန်းအဝိုင်းလို့လည်း အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဖုန်းမြည်သံလို့လည်းအဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားနဲ့ ဆက်စပ်ကြည့်ရင် ဒီအဓိပ္ပါယ်နှစ်ခုလုံးကိုတွေ့ရမှာပါ။ဒီသေမင်းတမာန် ဗီဒီယိုတိပ်ခွေ ဇာတ်လမ်းကို ကြည့်ဖူးသူတွေများမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အထူးတလည်မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားလေးကို Ring ဆိုတဲ့ ဂျပန် ဇာတ်လမ်းတစ်ခုက ကျောရိုးယူပြီးရိုက်ထားပေမယ့်တစ်ဝက်လောက် အကြောင်းအရာမတူပါဘူး။ ဇာတ်ကားရဲ့ အဓိကဇာတ်ဆောင် မင်းသမီးနဲ့မင်းသားတို့က ဒီဇာတ်ကားကိုဟားစရာဖြစ်မယ်လို့ ထင်ထားခဲ့ကြပေမယ့် အရမ်းကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။သရဲမလေး ဆာမာရာနေရာက သရုပ်ဆောင်တဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင် Daveigh Chaseဆိုရင် သူ့ကိုယ်သူပြန်မကြည့်ရဲတဲ့အထိကြောက်မိပါတယ်တဲ့။ ဒီဇာတ်ကားလေးကို ပြန်လည်ခံစားချင်သူတွေ အရင်ကအရမ်းလန့်ခဲ့ဖူးတာလေးတွေကိုပြန်သတိရချင်သူတွေအတွက် ပြန်တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ဗျာ။ဒီကားလေးက Rating မြင့်တဲ့ Horror, Mysteryဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်တာကြောင့်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ Credit Review Zawgyi The Ring အဝန္းအဝိုင္းလို႔လည္း အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ဖုန္းျမည္သံလို႔လည္းအဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကားနဲ႔ ဆက္စပ္ၾကည့္ရင္ ဒီအဓိပၸါယ္ႏွစ္ခုလုံးကိုေတြ႕ရမွာပါ။ဒီေသမင္းတမာန္ ဗီဒီယိုတိပ္ေခြ ဇာတ္လမ္းကို ၾကည့္ဖူးသူေတြမ်ားမယ္ထင္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အထူးတလည္မိတ္ဆက္ေပးစရာမလိုေတာ့ဘူးထင္ပါတယ္။ဒီဇာတ္ကားေလးကို Ring ဆိုတဲ့ ဂ်ပန္ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုက ေက်ာ႐ိုးယူၿပီး႐ိုက္ထားေပမယ့္တစ္ဝက္ေလာက္ အေၾကာင္းအရာမတူပါဘူး။ ဇာတ္ကားရဲ႕ အဓိကဇာတ္ေဆာင္ မင္းသမီးနဲ႔မင္းသားတို႔က ဒီဇာတ္ကားကိုဟားစရာျဖစ္မယ္လို႔ ထင္ထားခဲ့ၾကေပမယ့္ အရမ္းကိုေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။သရဲမေလး ဆာမာရာေနရာက ...